Generation Jet Set: Ahoana ny fomba hifandraisanao amin'ireo millennial manankarena
Home » Lahatsoratra farany farany » Associations News » Generation Jet Set: Ahoana ny fomba hifandraisanao amin'ireo millennial manankarena
Associations News • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao momba ny indostria fihaonana • Vaovao • Fanambarana ho an'ny mpanao gazety • Tourism • Travel Wire News • Vaovao farany momba ny UK
Raha heverinao fa fantatrao ny fomba fisainan'ireo Millennial dia azonao atao ny mieritreritra indray, amin'ny fotoana iray ao amin'ny WTM London 2017, hetsika manerantany ho an'ny indostrian'ny fizahan-tany, dia hampamantatra Fikarohana BBC momba ny taranaka.
Ny sokajin-taona Millennial dia matetika no faritana ho ireo teraka tany am-piandohan'ny taona 1980 ka hatramin'ny faran'ny taona 1990 ary ny fahazarana mividy dia mahaliana ny olona mivarotra dia rehetra.
BBC World News dia nanao ny fikarohana vaovao, Manatratra ireo Arivo Taona Manankarena ary izany dia hohazavaina mandritra ny fivoriana. Ny fikarohana dia nitady izay hiavaka momba ity taranaka ity sy ny fifandraisany amin'ireo marika, haino aman-jery ary dokam-barotra. Nahagaga ny valiny.
As Ros Atkins, mpanolotra ny Source Outside amin'ny BBC World News ary BBC World Service, hanazava, ny fikarohana dia nahita fa ny ankamaroan'ny fiheverana mety hataontsika momba ny fomba fisainana sy fahatsapana ary fitondran-tenan'ny Millennial dia maneho fotsiny ireo Millennial manan-karena voalohany indrindra.
Ny fandinihana dia nanadihady ny fomba ifandraisan'ireto olona manankarena Millennial ireto amin'ny marika, sy ny zavatra antenain'izy ireo noho ny tsy fivadihan'izy ireo. Tamin'izany no nahitany ny fiantraikan'izany amin'ny, indrindra, ny fifandraisan'izy ireo manokana amin'ny vola sy ny tontolo iainana.
The fivoriana mitranga ao amin'ny Teatra aingam-panahy on Alarobia 8 Novambra amin'ny 12.45 - 13.45. Mandritra io fotoana io, tontonana iray amin'ireo manam-pahaizana ihany koa no haneho ny heviny momba ireo Millennial manan-karena sy ny fifandraisan'izy ireo amin'ny marika ao anatin'ny indostrian'ny fizahan-tany.
Ny fifanakalozan-kevitra dia hahitana ny andraikitry ny marika eo amin'ny fiainan'ity tsena ity, inona ny antony ivelany izay misy fiantraikany amin'ny fanapahan-kevitr'izy ireo, ary inona Arivoary manankarena tadiavo raha resaka marketing sy fitsangatsanganana.
WTM London, Conference and Seminar Manager, Charlotte Alderslade, dia nilaza hoe: "WTM London no hetsika famoahana ny fikarohana ary hahita ny fironana farany amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahantany.
“Amin'ity taona ity, WTM London dia hamoaka fikarohana manokana avy amin'ny Euromonitor International, Nielsen ary ForwardKeys. Faly aho fa afaka mampiditra ny BBC World News ao anatin'io lisitra io. Ireo orinasam-pitaterana eran-tany dia mikendry ny hikendry ny mpanjifa Arivo Taona ary ity session ity dia hanampy azy ireo hanao izany. ”